Tora Zuva rePasi 2022 Limited Edition Dambudziko nhasi | Nhau dze iPhone
Nhasi nderimwe remazuva apo vashandisi veApple Watch vane dambudziko idzva rekuhwina menduru pamwe nekuwedzera hutano. Munyaya iyi ndiyo dambudziko rezuva repasi umo vashandisi vane Apple Watch vachakwanisa kudzidzisa kwemaminitsi makumi matatu kana kupfuura uye kuhwina mubairo.
Zvakare uyu Kubvumbi 22, Apple yakagadziridza logo yayo muzvitoro zvinopfuura zana pasi rese, ichiwedzera ruzivo kune logo yayo mune yegirini. Kambani iyi yakapawo vashandi vayo mat-shirt egirinhi mukuremekedza chiitiko ichi uye zvese zvinoedza kuitwa kuzivisa nezveZuva rePasi. Mazhinji eApple Stores pasi rese anoshanda nawo 100% simba rinowedzerwazve, data centers nezvimwe… Apple yakagara ichiisa dambudziko kune vashandisi veApple Watch vane zviitiko zvakakosha kusimudzira zuva iri.
Ita kurovedza muviri kwemaminetsi makumi matatu kana kupfuura kune Yepasi Zuva dambudziko
Izvi zviri nyore uye isu tichangoita chiitiko chakanyoreswa mukudzidziswa kweApple Watch yedu kana chero application inowedzera iyo data kune hutano mashandisiro echishandiso chedu. Kana tapedza tichatora menduru muchivharo chezvinetso zvishoma, mamwe anonamirwa kugovera pakati pemeseji mameseji uye chinhu chakakosha kwatiri, muyero wakanaka wekuita basa remuviri.
Tinogona kupedzisa dambudziko iri nekuchovha bhasikoro, kuenda kunomhanya kana kuburikidza nemhando dzakasiyana dzekudzidziswa idzo application inokwanisa kunyoresa uye iyo inoita kuti iwanikwe kwatiri. Dambudziko rakakurudzirwa naApple gore rapfuura kuti tipemberere zuva iri raive rakafanana, kurovedza muviri kwemaminitsi angangoita makumi matatu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Tora Zuva Renyika 2022 Limited Edition Dambudziko Nhasi
Creative Outlier Pro, maficha ekutanga ari pasi pe €90
Maitiro ekusimudzira yako MagSafe bhatiri saka inochaja yako iPhone nekukurumidza